Tababar u soo xirmay Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC [Muuqaal+Sawirro] – TPEC
Waxaa maanta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kusoo gaba-gaboobay tababar muddo shan cisho ah u socday Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC.
Tababarkan ayaa kor loogu qaadayay aqoonta guddiga iyo shaqaalaha, sidoo kale waxaa si khaas ah loogu lafa-guray qorshaha iyo sharciga Diinwaangalinta cod-bixyaha, waxaana la isku raacay qabyo-qoraalkii 1aad oo loo saaray guddi diyaariya.
Aqoon is-weydaarsigan waxaa bixinaysay hay’adda Safer-world oo gacan ka siisa Guddiga tayaynta shaqaalaha iyo arrimaha Dimuqraadiyadda Puntland.
Ismaaciil Ibraahim oo ka socday Safer-world ayaa u mahadceliyay xubnaha Guddiga iyo shaqaalihii ka qayb qaatay tababarkan oo uu tilmaamay in looga gollahaa sidii loo ogaan lahaa baahiyaha TPEC.
Sidoo kale Guddoomiye ku-xigeenka dallada ururrada aan dowliga ahayn ee PUNSAA, Mustafa Cabdullaahi Cabdi, ayaa soo dhaweeyay qorshaha wada-shaqaynta TPEC iyo Safer-world, wuxuuna tilmaamay in arrintaasi horseedayso hirgalinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland.
Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, Maxamuud Soofe Xasan, oo soo xiray tababarka ayaa u mahadceliyay Safer-world wuxuuna ka codsaday inay sii wadaan gacansiintooda ku aadan arrimaha Dimuqraadiyadda Puntland.